Archive du 25-mars-2022
Kaominina Antananarivo Renivohitra Misy fitantanam-bola hafahafa
Manomboka tezitra sy mampiaka-peo amin’ny fomba fitantanana ara-bola ao amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) amin’ny alalan’ny fampidirana ilay orinasa SMGD (Société Municipale de Gestion Digitale) ireo mpiasan’ny Kaominina Antananarivo.
Aroso foana aloha ny vahaolana
Isaky ny tsapa fa mbola misy azo atao hivoahana amin’izao olana lalina eto amin’ny firenena izao dia aroso foana aloha ny vahaolana na hihaino izany na, sanatria, hitohy tsy hihaino ny fitondram-panjakana heverina ho mahefa eto
Antetezambaro Toamasina II Raikitra ny fitaterana fanafody amin’ny “drône”
Mihazakazaka manaraka ny fivoaran'ny tontolon'ny fitaterana sy ny fomba fitaterana ireo fanafody sy kojakoja medikaly eto Madagasikara.
Minisiteran’ny mponina « Tokony hifanaraka amin’ny vola miditra ny zaza ateraka »
13 taona dia efa misy miteraka ireo vehivavy eto amintsika indrindra fa ny any amin’ny faritra. Ankoatra izay dia misy ireo mahatratra hatrany amin’ny 6 ny zaza ateraky nefa tsy mifanaraka
Mpianatry ny Politeknika nosamborina «Bourse » no notakiana, sazy mihantona 1 hetsy Ar no azo
Efa nilamindamina ny raharaha famoahana ny vatsim-pianarana mpianatra eny amin’ny anjerimanontolo, taorian’ny fitakiana mahery vaika teny amin’ny politeknika Vontovorona herinandro mahery izay ka nisy mpianatra roa
Andriampeno Ramiliarison “Tokony hijery loharanon-tsolika hafa isika”
Midina be latsaky ny 100 dolara izao ny barilin-tsolika amin’izao isika miresaka izao (TTF: omaly), hoy ny filohan’ny filankevim-pitantanan’ny faribolam-pandinihan’ireo mpahaitoekarena eto Madagasikara na CREM,
Andry Andriatongarivo Omena andraikitra hafa sa ampidirina garazy?
Tsy niandry ela fa notontosaina omaly alakamisy 24 martsa 2022 ny fifamindram-pahefana teo amin'ny Sekretera Jeneralin’ny Minisiteran’ny Angovo sy ny akoran’afo teo aloha Atoa Andriatongarivo Nasolo Tojonirina
Fametrahana fitondrana tsara tantana Nanokanan’ny Amerikanina 15,5 tapitrisa dolara
Vola mitentina 15,5 tapitrisa dolara no haompan’i Etazonia amin’ny tetikasa « Rindra » haharitra 5 taona hanamafisana ny fitondrana tsara tantana eto Madagasikara.
Minisitry ny asa tanana sy ny haitao Nihaona tamin’ireo mpandraharaha ao Toamasina
Nisy omaly ny fihaonan'ireo mpandraharaha sy ny tomponandraiki - panjakana ary ny minisitra mpiahy ny faritra Atsinanana sady minisitry ny asa tanana sy haitao, Sophie Ratsiraka tao amin’ny Neptune, Toamasina.
Moto eto an-drenivohitra Tsy tokony hihoatra ny 40 km/ora ny hafainganam-pandeha
Saro-pady ny fitondrana kodiaran-droa na moto ka ilana fitandremana. Raha sanatria tratry ny lozam-pifamoivoizana mantsy izy ireny dia avy hatrany ireo olona mitaingina azy no lasibatra raha mbola misy vatany miaro kosa izany ho
Antoko politika Natiora “Fotoana hampiasana an’I Bemolanga sy Tsimiroro izao”
Miakatra noho ny fanapahan-kevitry ny OTAN sy ny amerikanina izao ny vidim-piainana manerana izao tontolo izao, hoy ny antoko politika Natiora.
Paul Rabary “Aza manantena raha mbola tsy voafehintsika ny sandam-bola”
Tsy mbola fotoanan’ny fanaovana tomban’ezaka ho an’ny filoham-pirenena izao kanefa na izany na tsy izany dia efa akaiky ny fiafaran’ny fe-potoam-piasany, hoy ny mpahaifiarahamonina politika, Paul Rabary.
Noho ny adalan’ny mpitondra Malagasy Nafindra any Afrika Atsimo ny “AviaDev 2022”
Taorian’ny fanaisaorana tamin’i Madagasikara ny fandraisana ny “AviaDev Africa 2022” tokony hatao ny jona 2022 izao,
Benny, Bebey, Nini Hihira Lolo sy ny tariny
Avy hatrany dia marihina fa tsy “poisson d'avril” akory ity, hoy I Nini ao amin’ny tarika Colbert. Hihira Lolo sy ny tariny etsy amin’ny Le Klub Sahameva Ambohimangakely ny 1 aprily izao I Benny sy Bebey ary Nini.
Kolejy sacré coeur Toliara I Mpianatra maromaro tratran’ny ambalavelona
Mpianatra maromaro manovo fahalalana eo anivon’ny kolejy sacré coeur Toliara I no tratran'ny ambalavelona omaly ny maraina , raha araka ny loharanom-baovao azo.
Saofera nanompa sy tsy nanaja olona Mety hosintonina ny “pérmis” sy ny “capacité”
Nampanantsoina ary efa eo ampelatanan'ny ATT ny taratasy fahazoan-dalana hamily na "pérmis" sy ny "capacité". Ho atolotra ny CRPC na « Commission de retrait des pérmis de conduire »
Zotra Ligne E Mbola misy manary an-dàlana ihany
Na efa misy aza ireo tarehin-tsoratra napetraky ny kaoperativa amin’ny zotra “Ligne E” mampahafantatra ny làlana halehan’ny fiara,
Maharidaza Manjakandriana Namono zaza menavava ilay taksibrosy
Zaza menavava iray vao 1 volana sy 22 andro monja no fantatra fa maty voadonan'ny taksibrosy teny an-tanan-dReniny ny talata maraina teo tokony ho tamin'ny 10:15, tao Maharidaza, distrikan'i Manjakandriana,
Fahasimban’ny tetezan’Antanambao Tsy hay hoe rahoviana ny fanamboarana
Namoaka filazana omaly ny minisiteran'ny asa vaventy fa mampahafantatra ny besinimaro hoe voafetra ho "25 taonina" ny lanjan'ny fiara mandalo eo amin’ny PK 501+706, tetezan'Antanambao,
Andranomanalina Tratra ireo jiolahy mpanendak’olona eny Isotry
Tratra ireo roalahy ati-doha amin’ny fanendahana olona eny Isotry izay samy vao 21 taona avy. Teny Andranomanalina no tratra izy ireo omaly tokony ho tamin’ny 09 ora maraina, manakaiky ny kolejy Champagniat.
Hetsika LGBT Handinika ny tokony atao ny fiangonana
Rahampitso sabotsy manomboka amin’ny 3 ora tolakandro dia hisy ny velankevitra izay tarihin’ny mpitandrina Hubert Rakotoarivony.
Mahamasina Am-polony ireo mpivarotra tsy afaka nivarotra omaly
Nisavoritaka ireo mpivarotra tetsy Mahamasina manoloana ny kianja mitafo omaly maraina. Tsy afaka nivarotra namonjy ny toerana mahazatra azy isaky ny andron’ny Alakamisy mantsy ireo mpivarotra lamba miisa 40 teo ho eo